सुर्खेत, माघ २ गते । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितहरुको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । परीक्षणको दायरा घटेसँगै नयाँ पत्ता लाग्ने सङ्क्रमितको संख्या पनि घटेको छ । साथै रोग निको भएर घर जानेहरु बढेपछि सक्रिय सङ्क्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रवार निकालेको विज्ञप्तिमा कर्णालीमा कुल संक्रमितको संख्या सात हजार ४५३ पुगेको छ । कर्णालीमा गत जेठदेखि कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा भारतबाट आउनेहरुका कारण पिसिआर परीक्षण दायरा बढाइएकोमा गत कात्तिकदेखि परीक्षण घटेको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल फर्सन डा. नवराज केसीले कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिएका कारण परीक्षणको दायरा र सङ्क्रमितहरु पनि घटेको बताउनुभयो । उहाँले मानिसहरु पनि कोरोनाप्रति सजग भएको, दूरी अपनाएको, मास्कको प्रयोग गर्ने गरेको र सामान्यरुपमा लिँदा सङ्क्रमण दर पनि घटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भदौमा सबैभन्दा धेरै २१ हजार परीक्षण
असोजमा धेरै सङ्क्रमित पुष्टि
सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित
कात्तिकमा सबैभन्दा धेरै निको
२८ जनाको मृत्यु
कोरोनाका कारण कर्णालीमा हालसम्म २८ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा २० पुरुष आठ महिला छन् । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका १६, दैलेखका छ, डोल्पा, कालीकोट, रुकुम पश्चिमका एक/एक जना र बाँकेका दुई तथा स्याङ्जाका एक जना छन् ।
सक्रिय सङ्क्रमित १११ जना
अव प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका आइसोलेशनमा गरी १११ जना मात्रै सक्रिय सङक्रमित छन् । सल्यानमा ३१, सुर्खेतमा २२, डोल्पामा २५, दैलेखमा १७, हुम्लामा ११, जाजरकोटमा ३ र जुम्लामा २ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ ।
तीन जिल्लामा सङ्क्रमित शुन्य
शुक्रवारसम्म कर्णालीका तीन जिल्लामा सङ्क्रमितको संख्या शून्य छ । कालीकोट, मुगु र रुकुमपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या शून्य छ । तथ्यांक हेर्दा अब जुम्ला र जाजरकोट पनि शून्य हुने अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
अस्पतालमा दुई जना मात्रै उपचाररत
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा शुक्रवारसम्म दुई जना सङ्क्रमितमात्रै उपचारमा हुनुहुन्छ । अस्पतालका कोरोना फोकल फर्सन डा. नवराज केसीले ६७ वर्षीया महिला र ८० वर्षीया पुरुष मात्रै कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।